मुख्य पृष्ठक्रिकेट खेलकुदसन्दीपले भने : म टाढा भए पनि मन नेपालमै छ
विराटनगर, १० कात्तिक । नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले विजया दशमीको शुभकामना दिएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उनले दसैंको शुभकामना दिएका हुन् ।
सन्पीप हाल इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट खेल्ने क्रममा यूएईमा छन् । दिल्ली क्यापिटल्समा आवद्ध उनले अहिलेसम्म माैका पाएका छैनन् । दिल्लीले जारी सिजन ११ खेल खेलिसकेकाे छ ।
सन्दीपले आज ट्वीट गर्दै आफू जहाँ भए पनि मन नेपालमा रहेकाे जनाएका छन् ।
‘हिन्दूहरूको महान् चाड शुभ विजया दशमीको पावन अवसरमा माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरून् । सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना । सुरक्षित र स्वास्थ्य रहनुहोस् । सम्पूर्णमा मेरो माया । टाढा भए पनि मन भने नेपालमै छ। शुभ दसैं,’ उनल लेखेका छन् ।
हिन्दुहरुको महान् चाड शुभ बिजया दशमीको पावन अवसरमा माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरुन् । सुख, शान्ति, समृद्धी तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना ! सुरक्षित र स्वास्थ्य रहनुहोस् ! सम्पूर्णमा मेरो माया। टाडा भएपनि मन भने नेपालमै छ। शुभ दशैं।
— Sandeep Lamichhane (@Sandeep25) October 26, 2020